बीपी प्रतिष्ठान धरानमा दुई जना संक्रमितको मृत्यु - ePosttimes
Home१ नम्बर प्रदेशबीपी प्रतिष्ठान धरानमा दुई जना संक्रमितको मृत्यु
बीपी प्रतिष्ठान धरानमा दुई जना संक्रमितको मृत्यु
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०४:३१ १ नम्बर प्रदेश, कोरोना, समाचार 0
भदौ-१२, धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
झापाको दमक-३ घर भएका ८३ वर्षीय पुरुष र मोरङको बेलबारी-५ की ५६ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो ।
८३ वर्षीय पुरुषको आज बिहान ३ः४५ बजे र ५६ वर्षीया महिलाको ३ः१४ बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिए ।
८३ वर्षीय पुरुष बी एण्ड सी टिचिङ अस्पताल विर्तामोड झापाबाट रिफर भएर धरानस्थित प्रतिष्ठानमा आएका थिए । उनमा अत्यधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो । साथै उनी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अल्प रक्त कोशिका र मिर्गौलाको दीर्घकालीन समस्याबाट पनि पीडित थिए । उनको अस्पतालमै डायलायसिस गरिएको थियो ।
उनमा भदौ ३ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने सोही दिन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको थियो ।
यसैगरी ५६ वर्षीया महिला कोशी अञ्चल अस्पतालबाट रिफर भएर प्रतिष्ठानमा आएकी थिइन् । उनमा पनि अत्यधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो । उनको दीर्घकालीन रोगबारे जानकारी नभएको र आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेको डा. सापकोटाले बताए ।
ती महिलामा यही भदौ ९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने सोही दिन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको थियो ।
456600cookie-checkबीपी प्रतिष्ठान धरानमा दुई जना संक्रमितको मृत्युyes
प्रदेश १ मा १ सय ९ कोरोना संक्रमित थपिए, मोरङ र सुनसरीमा समान ४८ जना कोरोना संक्रमित इटहरीमा थप ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, इटहरीमा संक्रमित संख्या १ सय २५ पुग्यो संक्रमित बढे संगै भोजपुरमा एक हप्ता लकडाउन, संक्रमितको सख्या २० पुग्यो मन्त्री घिमिरे १७ दिनपछि कोरोनामुक्त वीपी प्रतिष्ठानमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुनेको संख्या ३३ पुग्यो धरानमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै, एकै दिन ६९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि प्रदेश १ मा संक्रमित संख्या तिब्रगतिमा बृद्दी, आजमात्रै १२९८ थपिए हतुवागढी गाउँपालिकामा थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमीत संख्या १८ पुग्यो
प्रदेश १ मा १ सय ९ कोरोना संक्रमित थपिए, मोरङ र सुनसरीमा समान ४८ जना कोरोना संक्रमित